Ny sekretera jeneralin'ny AFRAA dia miresaka momba ny fiaramanidina
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sekretera jeneralin'ny AFRAA dia miresaka momba ny fiaramanidina
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News
Marina fa ny indostria misy antsika dia feno potika tsy mitongilana amin'ny fitomboana araky ny fanadihadiana ataon'ny indostria maro. Ny fanamby rehetra manakana ny fahombiazantsika amin'izao fotoana izao dia mitaky ezaka iaraha-miasa sy iombonantsika raha te-hahatsapa ny tanjontsika iraisana isika amin'ny orinasa fandraharahana fiaramanidina tena mahomby sy maharitra.
Hitanay ny lanja sy ny lanjany lehibe amin'ny fanekena ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ireo mpitaterana afrikanina sy ny mpiray antoka aminy ho fomba azo antoka hiatrehana ireo fanamby iraisana amin'ny alàlan'ny fitadiavana vahaolana iraisana hampisondrotra ny vola miditra sy ny fifaninanana. Eny tokoa, ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny sehatry ny indostria dia hamela antsika hahomby kokoa amin'ny sehatra stratejika sy azo ampiharina.
Iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny fikambanana Air Madagascar Association ny famporisihana ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ireo mpikambana ao aminy. Nanangana komitin'ny fandrindrana ny zotra Route Network izahay hanohanana ny fifanarahana ara-barotra misy eo amin'ny mpikambana ato aminay. Betsaka no efa nanao sonia ny fifanarahana ifampizarana sy fifanarahana fizarana kaody. Misy ihany koa ny endrika fiaraha-miasa sy fizarana loharano hafa eo amin'ireo kaompaniam-pitaterana ana habakabaka izay atrehin'ny AFRAA toy ny fampiasana ivon-toeram-panofanana sy mpampiofana efa za-draharaha ao amin'ny kaontinanta, fikojakojana ary fanangonana loharanom-pahalalana ao amin'ny Drafitr'asa vaovao ho an'ny Fikambanana. Hanohy ny fiadiana ny ho tompon-daka isika, amin'ny famporisihana ny fiaraha-miasa miaraka ary hanome torolàlana ary fanampiana ara-teknika ho an'ny fahombiazana maharitra amin'ny indostrian'ny fiaramanidina afrikanina.